Aéroport Ivato: Zandary iray tra-tehaka nitaky vola tamina vazaha vavy
jeudi, 24 octobre 2019 14:51
Vazaha vavy iray, isan’ireo mpandeha tamin’ny sidina Kenya Airways avy any Nairobi, nigadona teny amin’ny Aéroport Ivato no tonga nitaraina tao amin’ny Polisy miaro ny sisintany (PAF), fa nitakiana zandary iray vola manodidina ny 280 000 Ariary (70 euros) saran’ny « VISA » idirany eto Madagasikara.
Omaly alarobia 23 oktobra tamin’ny efatra ora tolakandro no nisehoan’ity tranga ity, ary zandary mitondra galona « 1ère classe », miasa eny an-toerana, saingy mbola tokony any ampialan-tsasatra no tompon’antoka.
Ny alarobia alina, tamin’ny 9ora sy sasany, ihany dia efa nataon’ny Polisy ny famotorana azy, natrehin’ny manamboninahitra ao amin’ny kaompania mifehy azy.
Hisy amin’ity anio ity ny fampifanatrehana an’ilay zandary sy ilay vazaha vavy nanao fitarainana teo anivon’ny PAF. Tetsy ankilany dia namoaka fanomezan-dalana hanenjehana ilay zandary ny avy eo anivon’ny Sekretariam-panjakana miadidy ny Zandarimarim-pirenena, izay anatin’ny fanadiovana tanteraka amin’izao fotoana izao, hamerenana ny fitokisan’ny Vahoaka ny Zandarimaria.